Filannoo Ameerikaa: Tiraamp nageenyaan aangoo dabarsuuf kutannoo hin qaban - BBC News Afaan Oromoo
Filannoo Ameerikaa: Tiraamp nageenyaan aangoo dabarsuuf kutannoo hin qaban
Pirezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp filannoo pirezidantummaa Sadaasa dhufu filatamu yoo injifataman nageenyaan aangoo dabarsuuf kutannoo akka hin qabne ibsan.
‘’Waan ta’uuf jiru wajjumaan ilaalla’’ jedhan pirezedantichi ibsa wayita kennan.
Tiraamp dhimmi firii filannoo xumurrisaa Mana Murtii Waliigalaa Ameerikaattii furmaata waan argatu natti fakkaata jedhan, sagalee filannoo karaa poostaa sassabamuurra shakkii akka qaban wayita ibsan.
Kutaaleen bulchiinsota Ameerikaa harki caalaan garuu namoonni koronaavaayirasiif akka hin saaxilamneef sagalee filannoo karaa kennamu karaa poostaan akka sassaabamu jajjabeessu.
Tiraamp maal jedhan?
Roobii galgala Tiraamp morkatasaanii kan Dimokiraatotaa Joo Baayideeniin yoo injifataman aangoo nageenyaan akka dabarsan gaafatamanii, isaan garuu akkaataa sagaleen filannoo kennamurratti komiin qaba jedhanii deebisani.
Tiraamp sagaleen filannoo hatamuu danda’a jedhanii maaliif yaadda'aan?
Tiraamp waraana Ameerikaatti qoose jedhamee akkaan qeeqame
Ilhaan Omaar Pireezidant Tiraampiin akka ''daa'ima ganna saddeetiitti bulchita'' jette
‘Sirni sagaleen itti kennamu balaa qaba’’ jedhan Tiraamp.
Tiraamp dorgommii pirezidantummaa bara 2016 darbe irratti firii filannoo fudhachuu didnaan, morkattuun isaanii yeroo sanaa Hilarii Kilinteen haleellaa dimokiraasiirratti rawwaatame jechuun qeeqanii turan.
Yaada Tiraamp kaleessa kennan ilaalchisuun Senaatarri Rippabilikaanota Miit Roominiin‘’ bu’uurrii dimokiraasii aangoo karaa nagaatiin dabarsuudha, pirezidantichi wabii heeraa kabajuu didan fudhatama hin qabu, hin yaadamus’’ jedhan tiwitarasaanirratti barreessan.
Dimokiraatoonni maal jedhan?
Filannoo pirezidatummaa dhufurattii Tiraamp kan morkatan Joo Baayidan, yaadni Tiraamp ‘’bu’uura hin qabu’’ jechuun sirrii akka hin taane qeeqan.
Gartuun Dimokiraatotaa ‘’Ameerikaan kanneen daangaa darban sirnaan masaraa Waayit Haawusii baasu beekti’’ jedhan.
Joo Baayidan immoo Tiraamp deebi’anii yoo filataman jeequmsi filannoodhaan walqabate akka uumamu kakaasu jechuun gartuun paartii morkataasaanii kan himatan.
Kana malees Tiraamp firiin filannoo karaa poostaan sassaabamu hannaa/burjaajiif kan saaxilame ta’uu kaasan.
Kanaafu dhimmi firii filannoo biyyatti ilaallatu mana murtii olaanaa biyyattii akka murtoo argatulle barbaadu.
Pirezdaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp eenyu?
5 Fuulbaana 2020
Filannoo Ameerikaa: Doonaald Tiraamp sagaleen filannoo hatamuu danda’a jedhanii maaliif sodaatan?